नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ? - Himali Patrika
नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ?
हिमाली पत्रिका ९ कार्तिक २०७७, 3:47 pm
काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
हालै ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किएको सन्दर्भमा मिश्रले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सो प्रश्न गरेका हुन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय गुप्तर प्रमुख गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएको बताएका छन् । सोही सन्दर्भमा मिश्रले मन्त्री ज्ञवालीलाई ८ प्रश्न सामाजिक सन्जालमार्फत् सोधेका छन् ।
नेपालको स्वाभिमान यति तल्लो तहमा विरलै झरेको उल्लेख गर्दै मिश्रले भ्रष्टाचारमात्र होइन यो देशमा राष्ट्रघातलाई सहन गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको जनाएका छन् ।
मिश्रले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष राखेका ८ प्रश्न यस्ता छन्